I-15 Izitifiketi eziphezulu zokuhlawula kwi-2017 | IYO
Ukuqinisekiswa yindlela yokwenza umsebenzi wokuqhubela umsebenzi wakho kwi-IT shishini. Kungakhathaliseki ukuba usebenza kumashishini, uqeqesho lwabucala, iinkonzo zonyango, urhulumente okanye nayiphi na enye indawo esebenzisa iingcali ze-IT, inketho yakho efanelekileyo yokufumana impumelelo yengcali kukuvumela ukuba ukwazi ukufumana ubungqina bakho kunye nolwazi ngokuxutywa ngokuzikhethela kwezatifikethi.
I-15 eziPhakamileyo zokuHlawulwa kweziqinisekiso
I-CRISC: I-Certified in Risk and Information Systems Control
I-CISM: UMphathi woKhuseleko loLwazi oluqinisekisiweyo
I-CISSP: IiNkcukacha zoLondolozo lweNkqubo zoLwazi
I-CISA: uMphicothi-zincwadi woNxibelelwano lweeNkcukacha
I-CCDA: I-Cisco Certified Certified Associate
I-CCDP: I-Cisco Certified Design Design
PMP: Ulawulo lweProjekthi yoLawulo
I-MCSE: Injini yeComputer Certified Microsoft
I-CCNA: I-Associate Network Certified Cisco
I-CCA-N: I-Citrix eQinisekisiweyo -Nxibelelwano
Enye ingongoma ebalulekileyo yenkcazo yinto eqhelekileyo yokuhlawulwa yonyaka ehlawulwa kumntu ngamnye ummangalelwa onobungqina obucacileyo. Izatifikethi ezimbalwa zineempahla zokuqeqesha ezongezelelweyo ukuba zifake iinkcukacha ezininzi malunga nendlela yokulungiselela nokucwangcisa uvavanyo kwaye ufumane nganye yazo. Nantsi ingqungquthela:
NgokweNkqubo yoPhicotho lweeNkqubo zoLwazi kunye noLawulo loLawulo, ukuqinisekiswa kwe-CRISC kuqinisekisa ukuba umninimzi unobungozi kwiinkqubo zedata kunye nokuyila / ukuphumeza izixazululo. Umnini we-CRISC oqinisekisiweyo unomvuzo oqhelekileyo we-$ 119,227 / ngonyaka.
Ukuqinisekiswa kwe-CISM kukwazi ukulawula ukugcinwa kwezokuphepha kwedatha, njengomntu olawulayo, oyilo kunye nokuvavanya ukhuseleko lwezcukacha kwi-affiliation enikeziweyo. Njengoko kuboniswe yiNgxelo kunye neNkcazo yeMvuzo, abanini beli qiniso bafumana i-$ 118,348 / ngonyaka.
Ukuhlawulwa kwe-CCNP ku-$ 97,038 / iminyaka eqhelekileyo, ukuqinisekiswa kwe-CCNP kuluncedo kumntu ongaphantsi konyaka omnye wamava olawulo lweenkqubo kunye nokuqinisekisa ukuba umnini-mvume we-CCNP unokuqhubeka kwaye asebenze insimu ebanzi ahlele kwaye asebenze kunye nabaphathi kwizisombululo.
Ukugunyazwa kwe-ITIL v3 - I-ITIL Master - Ukuhlawula ngokuqhelekileyo ngonyaka we-ITIL Abanikazi bokuqinisekisiweyo be-$ 95,434 / ngonyaka. Umqinisekisi we-Master ufuna i-ITIL Expert accreditation kwaye ubona abantu abangafaka izicelo ze-ITIL izixazululo zexabiso le-IT kwiimeko zangempela.
Njengoko kuboniswe ngongqungquthela, ukwenziwa komgangatho yenye yezona zigaba eziphezulu zokusetyenziswa kwe-enterprise kwi-2017. Umvuzo oqhelekileyo wonyaka wokuba abaphathi be-CCP-V babe ngu-$ 102,138. Oku kubonakaliswa kwintlalo yeengcali zeCitrix Certified Professional - Ukuqinisekiswa kokunyanisekileyo
Inombolo ye-3 kwi-sundowns yeziqinisekiso ezininzi zokuhlawula izityholo ezixhasayo ziNgcaciso zeNgcaciso zeNkcukacha zoKhuseleko okanye kwi-ISC) i-2. Ezi zatifikethi zibona amandla ekukhuseleni nasekulawulweni kweengozi, kunye nokuphucula inkqubo yokukhuseleko. Isiqhelo seminyaka esiqhelekileyo sokubhengezwa kwemali yabangqina besi $ 110,603 / ngonyaka.
I-CISA iqinisekisa ukuba abahloli beeNkcukacha zeeNkcukacha baneempembelelo ezichanekileyo zokuvavanya iinkqubo kwaye bathathe emva kwezinyathelo ezimiselweyo "zokukhuthaza ukuzithemba kunye nokuhlonishwa kwiinkqubo zedatha". Umvuzo oqhelekileyo wobugcisa apha wawuyi-$ 106,181 / ngonyaka.
Oku kulandelayo kule ngqungquthela yiCCDA, isiqinisekiso sikaCisco kwinkqubo yoyilo. Ukongezwa ngokuqinisekileyo uqinisekisiwe ngesinye isiqinisekiso seCisco, umzekelo, i-CCNP Ukuhamba kunye nokutshintsha, njengoko kuyimfuneko yeCCDA. Umvuzo oqhelekileyo womnini we-CCDA yi-$ 99,701 / ngonyaka.
Abanikazi beCCDP bafumana umvuzo oqhelekileyo we-$ 105,088 / ngonyaka. Ukuqinisekiswa kwezinga lokuqeqeshelwa kumgangatho ophakanyisiweyo kucetywayo kubacwangcisi bezakhono eziphezulu abafuna ukuyila iipolitiki kunye nezolawulo.
Ukuqinisekiswa kweProjekthi yoLawulo lweProjekthi mhlawumbi ishishini eliphambili libonwe ukuvunyelwa kwezithuba zephambili zeprojekthi. Kuqinisekiswa kwehlabathi lonke kwaye njengokwenziwa kweNkqubo yokuLawula iNkxaso yeProjekthi: Ukuhlawula ngokuqhelekileyo kwileli li-$ 116,094 / ngonyaka.
IMicrosoft ishintshile indlela ye-MCSE (ngoku ihlala i-Microsoft Certified Solutions Expert) ukuba ibe yinkxaso enkulu engabonakaliyo ekugxininiseni ukutsha kwezinto ezintsha ngokubhekiselele kwiifom ezininzi kwiindawo ezahlukeneyo. Imbuyekezo eqhelekileyo kubo i $ 96,215 / ngonyaka.
I-Associated Network Cisco Certified Network Associate (CCNA) eqinisekisiweyo ifumana umvuzo oqhelekileyo we-$ 107,045, i-CCNA imigaqo yokuqinisekiswa iboniswe kwi-2012 kwaye igxininisa kwimpumelelo, umzekelo, ukugcinwa kwempahla, ukulungiswa, ubuchule, ukubhalisa kunye nokulawulwa kwenkqubo.
Ukuqinisekiswa kwe-MCSA kucatshulwa ukuba yi-IT yokuqinisekisa ngezinto ezihlukeneyo zeMicrosoft kwaye ingahlelwa ngamanani amaninzi, umzekelo, iDesktophu, Iseva, iDatabase, kunye noMthuthukisi. Umncintiswano ongekho nje unyaka owodwa uza kufumana i-$ 50,649, kwaye oku kuya kwandiswa kwi-$ 75,850 ngeminyaka eyi-10 yamava okanye ngaphezulu kakhulu.
Ukuqinisekiswa kweCitrix Certified Associate - Networking (CCA-N) yenzelwe ukuvunywa kwamakhono kunye nokufunda okulindelwe ukulawula iimeko zoshishino ezibandakanya iNetScaler Gateway ukufumana ukufikelela okude kude kwiidesktops, idatha kunye nezicelo. Ukuxhomekeke ekubandakanyekeni kwenkosi, ummeli ophethe olu bhengezo unokufumana i $ 43,000 ngonyaka.